Yakadzika Kupisa Sterilizers Fekitori | China Yakadzika Kupisa Sterilizers Vagadziri uye Vatengesi
EO Kubvisa Gasi Mudziyo
Kuburikidza neyepamusoro-tembiricha inobatsira, iyo ethylene oxide gasi yekurapa muchina inogona kuora iyo EO gasi kupinda kabhoni dhayokisa uye mvura mhute uye yakadonhedzwa yakanangana nekunze, pasina chikonzero chekuisa yakakwira-kukwira kubuda pombi. Iko kuora kwekuita kwakakwirira kupfuura 99.9%, iyo inoderedza zvakanyanya iyo ethylene oxide emissions.
XG2.C akateedzana sterilizer anotora 100% ethylene oxide (EO) gasi senzara yekudzivirira svikiro. Inonyanya kushandiswa kugadzira mbereko kune chaiyo yekurapa chiridzwa, oparesheni chiridzwa, uye zvekurapa zvemagetsi chiridzwa, mapurasitiki uye zvekurapa zvekushandisa izvo zvisingakwanise kutakura neakanyanya tembiricha uye yakanyorova sterilization.
SHINVA Plasma sterilizer inotora H202 seye sterilizing mumiririri uye inogadzira plasmatic nyika yeH202 nemagetsi emagetsi munda pasi pekupisa kwakaderera. Inobatanidza zvese zvine gasi uye plasmatic H202 kugadzira sterilization yezvinhu zviri mukamuri uye inoora iyo yakasara H202 mushure mekuvhiya.